Dowlada Mareykanka oo Dalka Qadar ka raadineysa in ay Alshabaab la heshiisiiso | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowlada Mareykanka oo Dalka Qadar ka raadineysa in ay Alshabaab la heshiisiiso
Dowlada Mareykanka oo Dalka Qadar ka raadineysa in ay Alshabaab la heshiisiiso
WASHINGTON – Sarkaal aad uyar oo caan ku ah la dagaalanka argagixisada oo lagu magacaabo Christopher C. Miller ayaa u duulay Bariga Dhexe bishii la soo dhaafay si uu u raadsado fikrad diblomaasiyadeed: isagoo weydiistay Qatar inay gacan ka geysato qorshayaasha lagu iibsanayo ama lagu fogeynayo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha sarsare ee Al-Shabaab, oo xiriir la leh al-Qaida. gudaha Soomaaliya, kuwaas oo aad uga go’an inay weeraraan Reer Galbeedka.
Miller wuxuu ka helay Kash Patel, oo markaa ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Golaha Amniga Qaranka. Lataliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump, Robert C. O’Brien, ayaa sidoo kale ka warqabay safarka, saraakiishu waxay sheegeen.
Laakiin waxay hareer mareen madaxa dibloomaasiyiinta qaranka, Xoghayaha Arimaha Dibada Mike Pompeo – markii uu ogaadayna wuxuu u qaatay fikrada in qeyb la dubay oo la xiray.
Hadda, xakamaynta amniga qaranka Mareykanka iyo siyaasadda arrimaha dibedda ayaa kor loo qaaday. Trump ayaa si lama filaan ah ugu rakibay Miller inuu noqdo sii hayaha xoghayaha difaaca toddobaadkan – isaga oo ka dhigaya, ugu yaraan warqad, Pompeo wuxuu u dhigmaa maamulka labadii bilood ee la soo dhaafay. Patel wuxuu noqonayaa madaxa shaqaalaha Miller.
Magacaabistu waxay kor u kac weyn ku yeelatay Miller, sarkaal hore oo Green Beret ah oo 11 bilood ka hor ahaa la taliye ka hortagga argagixisada ee NSC oo aan khibrad weyn u lahayn maaraynta hay’ad fidisa.
Awoodda iyo mas’uuliyadda aan caadiga ahayn ee uu qaadi doono inta lagu gudajiro astaamaha aan la hubin ee maamulka Trump – markii Trump uu diidayo inuu qirto inuu ku guuldareystay doorashada – isla markiiba wuxuu si aad ah isha ugu hayaa hogaamiyaha cusub ee Pentagon-ka.
Miller wuxuu soo bandhigay habdhaqan ixtiraam darro ah oo mararka qaar isku dhaca arrimaha siyaasadeed ee culus ee uu wax ka qabtay, sida laga soo xigtay dad la soo shaqeeyay.
Asalkiisii ​​hore ee ciidamada gaarka ah ee dowalada ayaa caan ku ah inuu yahay qof xukun adag oo aan had iyo jeer ixtiraamin habraaca kala shaandheynta xafiisyada ee loogu talagalay in lagu hubiyo in cawaaqibta ka dhalan karta si buuxda looga fiirsado ka hor inta uusan ficil sameyn.
Safarkii Miller ee aan hore loo soo sheegin ee uu ku tagay Qadar wuxuu siinayaa aragti ku saabsan maskaxda-dejiye xoghayaha. Xiritaanka xiisaha leh ee dadaalka wuxuu ahaa natiijo ceeb ku ah dowladda Mareykanka, qeyb ahaan maxaa yeelay amiirka Qatar ayaa horeyba u muujiyey ogolaanshihiisa inuu sahmiyo soo jeedinta Miller.
Waxay sidoo kale soo bandhigi kartaa nooca dadaallada ugu dambeeya ama hawlgallada, ha ahaato mid qarsoon ama qarsoodi ah, in Trump iyo kaaliyayaashiisa sare ay daba socon karaan toddobaadyadii ugu dambeeyay ee uu xafiiska joogay.
Tricia Bacon, oo ah khabiir ku takhasustay arrimaha Soomaaliya oo ka tirsan jaamacadda Mareykanka ee Washington, horayna u ahayd falanqeeye ka tirsan waaxda arrimaha dibedda ee la dagaallanka argagixisada ayaa tiri: “Nidaamka siyaasadeed ee maamulkan wuxuu noqday mid aad loola yaabo.”
Saraakiishii aqoonta u laheyd Miller hawlgabkiisii ​​dhicisoobay waxay ku sifeeyeen xaalad aan la aqoonsan karin sababtoo ah dabeecadda diblomaasiyadeed iyo sirdoon ee xasaasiga ah.
Afhayeennada Waaxda Arrimaha Dibadda, Golaha Amniga Qaranka iyo Miller ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan.
Miller wuxuu umuuqday inuu yahay ergay aan laga fileynin culeyska dublamaasiyadeed ee xasaasiga ah.
Wuxuu intiisa badan 31-sano oo milateri ah ku qaatay hawlo hawlo gaar ah oo hoos ah. Wuxuu amar ku siiyay koox si gaar ah uga falcelisa falcelinta degdegga ah ee u duulay Afgaanistaan ​​bishii Diseembar 2001 si ay u caawiyaan koox si kama ‘ah ugu dhacday bambo Mareykan ah.
Waxay u joogeen inay kordhiyaan amniga hareeraha Hamid Karzai, oo hadda loo magacaabay madaxweynaha ku-meel-gaarka ah ee Afghanistan. Intii lagu jiray Dagaalkii Ciraaq, Miller wuxuu ugaarsaday hoggaamiyeyaasha kacdoonka qiimaha badan.
2018, wuxuu noqday sarkaal sare oo argagixiso la dirir ah oo ka tirsan Golaha Amniga Qaranka, garabka Aqalka Cad ee ka caawiya maareynta arrimaha dhexgalka ee ku lug leh militariga, sirdoonka iyo siyaasadda arrimaha dibedda.
Miller wuxuu si joogta ah ula shaqeyn jiray Patel, kaaliyaha hore ee Rep. Devin Nunes ee California, kan ugu sareeya jamhuuriga ee guddiga sirdoonka aqalka iyo taageere cad ee Trump.
Taa bedelkeeda, Miller looma yaqaanno inuu yahay aragti kooxeed, sida ku xusan wareysiyada saraakiisha la soo shaqeeyay. Argagixisanimadiisa iyo faylalka uu diiradda saaray afduubka ayaa u oggolaaday inuu si weyn uga fogaado arrimaha amniga qaranka ee soo jiitay carada siyaasadeed xilligii Trump, sida Ruushka. Ilaalintiisii ​​NSC waxaa ka mid ahaa shirar u horseeday duulaankii kumaandooska Mareykanka ee waqooyi-galbeed Syria sanadkii hore si loo dilo hoggaamiyaha dowladda Islaamiga ah, Abu Bakr al-Baghdadi, wuxuuna helay kalsoonida saraakiisha sida O’Brien iyo Patel.
Sannadkan, Miller wuxuu si kooban ugu dhaqaaqay doorka la dagaallanka argagixisada ee Pentagon ka hor inta uusan Golaha Guurtida bishii Ogosto u xaqiijin inuu hoggaamiyo Xarunta Qaranka ee La-dagaallanka Argagixisada, oo ah hay’ad la abuuray ka dib weeraradii Sebtember 11, 2001, taas oo loo malaynayo inay u adeegi doonto sidii goob lagu nadiifiyo argagixisada. hanjabaada macluumaadka iyo isku dubaridka wadaaga sirdoonka ee ururada ay ka mid yihiin CIA, FBI iyo Hay’ada Amniga Qaranka.
Xaruntu uma baahna inay ka ciyaarto door hawlgal ah.
Laakiin markii Miller uu daraaseynayay warbixinnada sirdoonka ee ku saabsan hoggaanka sare ee Al-Shabaab iyo Soomaaliya, wuxuu saaxiibbadiis u sheegay inay suuragal tahay in wax laga beddelo isla’egta ku xirtay Mareykanka inuu dagaal aan joogto ahayn kula jiro Al-Shabaab – oo ay ku jiraan duqeymaha xilliyada qaarkood ay fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan ‘mintidiinta’ weerarkii lagu hoobtay ee Shabaab ay ku qaadeen saldhigga cirka Mareykanka ee Manda Bay, Kenya, bishii Janaayo.
Saraakiisha Mareykanka waxay in badan la halgamayeen sida looga fikiro Al-Shabaab – ururro si dabacsan u abaabulan, badankoodana waxay diiradda saarayaan hadafka khaldan ee ah in la xakameeyo Soomaaliya laakiin qaar ka mid ah ayaa doonaya inay ka qayb qaataan jihaadka caalamiga ah ee al-Qaida, iyagoo fulinaya argagixiso. weerarada ka baxsan xuduudaheeda.
Dhamaadkii maamulkii Obama, waaxda fulintu waxay u aragtay kooxda oo dhan inay cadow ku yihiin dagaalka lagula jiro argagixisada, Trump-na wuu fududeeyay xaddidaadda weerarrada millatari ee Soomaaliya.
Laakiin sannado badan oo qaraxyo caadi ah ayaa lagu guuldareystay in al-Shabaab la ciribtiro, sanadkii afraadna maamulka Trump ayaa ku qalday fikradda ah inuu dib uga laabto Geeska Afrika.
Intii lagu gudajiray qulqulkaas, Miller wuxuu isweydiiyay suurta gal ma tahay in lakala saaro kooxaha muhiimka ah ee Shabab iyo al-Qaida si loo yareeyo qatarta uu ku hayo danaha Mareykanka ee ka baxsan xuduudaha Soomaaliya. Wuxuu diiradda saaray koox ka kooban 10 hoggaamiyeyaal da ’ah oo xiriir shaqsiyadeed oo adag la leh al-Qaida, halkii uu ka doorbidi lahaa hoggaamiyeyaasha dhallinyarada ah ee waddaniyiinta ah.
Way adkayd in la helo sirdoon sax ah oo waqtigiisa ku habboon si loo bartilmaameedsado loona dilo hoggaamiyeyaasha xiriirka la leh Al-Qaacida Miller wuxuu kiciyay fikradaha go’doominta ama baabi’inta: Waxaa laga yaabaa in hoggaamiyeyaasha da’da yar lagu qanciyo inay ka horyimaadaan iyaga, ama kooxdii hore loo iibsan karo si ay uga leexdaan halganka, saraakiishu waxay yiraahdeen.
Waxaa macno samaynayay in Miller uu soo jiidan doono fikirka ah in heshiis aan caadi aheyn lala galo canaasiirta kooxaha xagjirka ah ee Islaamiyiinta ah si loo isku dayo yareynta qatarta argagixisada, iyadoo la tixgelinayo khibradiisii ​​hore ee sarkaal Green Beret ee Afghanistan iyo Ciraaq, ayuu yiri Luke Hartig, a Agaasimihii hore ee la dagaalanka argagixisada ee Golaha Amniga Qaranka intii ay jirtay maamulkii Obama oo la soo shaqeeyay Miller.
“Iyadoo lagu saleynayo asalka militari ee Chris Miller ee ciidamada gaarka ah, wuxuu hubaa inuu dano badan ka lahan doono inuu la shaqeeyo xoogag aan caadi aheyn ama kuwa kale si looga adkaado cadawgeena argagixisada,” ayuu yiri Hartig.
Qadariyiinta waxay khibrad u lahaayeen inay dhexdhexaadiye ka noqdaan wadahadalada nabada ee lala yeesho Talibanka Afghanistan. Miller wuxuu u aaday Patel fekerkiisa ah inuu u qoro dadaal isku mid ah. Ka dib markii loo duceeyay Golaha Amniga Qaranka, Miller wuxuu la xiriiray safiirka Qatar ee Mareykanka si uu u helo ducada amiirka dalka si uu u raaco fikradda.
Ka dib, dhammaadkii usbuucii Columbus, Miller iyo kaaliyayaashiisu waxay u duuleen Doha si ay wadahadallo ula furaan saraakiisha sarsare ee Qatar, oo ay ku jiraan wasiirkeeda arrimaha dibedda iyo hoggaamiyeyaasha sare ee argagixisada. Qadariyiinta ayaa la sheegay inay muujiyeen xiisaha qaar ka mid ah fikradaha laakiin waxay ka taxadireen sida loo sii wado. Tallaabo horudhac ah, waxay soo jeediyeen in lagu soo wareejiyo diblomaasiyiinta reer Norway ee sidoo kale la soo shaqeeyay go-betweens ee Taliban.
Miller ayaa ka soo laabtay safarkiisa isagoo wata qorshe ah in la qorsheeyo wadahadalo seddex geesood ah oo lala yeesho Qatar iyo Norway si loo soo bandhigo soo jeedinta, sida ay sheegeen saraakiisha. Waqtigaas, si kastaba ha noqotee, Pompeo iyo kaaliyayaashiisa sare waxay ogaadeen dadaalkiisa.
Tallaabada waxaa loo arkaayey Waaxda Arrimaha Dibedda dhexdeeda inay tahay diblomaasiyad iskeed u shaqeysa – oo lagu soo xadgudbay cowska Pompeo – iyo, si ballaadhan, saraakiil badan oo ka tirsan siyaasadda la dagaallanka argagixisada waxay u arkeen inay tahay mid aan ku filnayn in laga fikiro.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah: in la ogaado cidda lala hadlayo ee ka tirsan Al-shabaab, oo madaxdoodu ay isku dilaan midba midka kale markay isku hayaan fikradaha; ogaanshaha waxa dadaalku uga dhigan yahay dowladda cusub ee Soomaaliya ee Mareykanku taageerayo; iyo turxaan bixinta halista xiriirka bulshada ee wada xaajoodka dadka ku xiran al-Qaacida.
Pompeo wuxuu ku adkeystay in Waaxda Arimaha Dibada ay kala wareegto howsha Miller. Wuxuu arinta u gudbiyay waaxda Africa Bureau, halkaas oo saraakiishu sheegeen in si weyn loogu arkaayay inay xafiis ahaan dhimatay xitaa ka hor intaan Trump looga guuleysan doorashada – iyo dib u noqosho soo bandhigtay dowlada Mareykanka inay u muuqato duulimaad Bariga Dhexe.
Bacon wuxuu yidhi: “Sheekadani waa mid la yaab leh heerar aad u tiro badan,” Yaraynta qatarta danaha Mareykanka iyadoo laga takhalusayo 10 ka mid ah howl wadeenada Shabab ma haayo. Hanjabaada Shabaab ma ahan mid fudud. Horey waan isku daynay taas, mana aysan shaqeyn.
c.2020 Shirkadda New York Times
Previous articleXILDHIBAAN ABDISHAKUUR ALI MIRE TOLOW MAXAY TAHAY DANTA KU QASABTAY INUU U HADLO TALIYAHA NISA
Next articleHe sidestepped Secretary of State Mike Pompeo and got slapped down. Now he’s the new Pentagon chief.
DEG DEG:Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre oo goordhaw Muqdisho kasoo degay
Waxaa goordhaw garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kasoo degay Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre sidoo kale ah Musharax u...